Tirada dadka sharciga ka helay Sweden 2013 | Somaliska
Tirada dadka sharciga ka helay Sweden 2013
Sweden ayaa sanadkii 2013 waxay sharci degenaansho siisay dad gaaraya 116 500 qof kuwasoo 79 500 ka mid ah la siiyay sharci ku meel gaar ah, halka 37 000 ay heleen sharci joogto ah. Tirada dadka magangalyo doonka ah ayaa siyaaday sanadkii hore 24% iyadoo ay 54 000 qof iska dhiibeen Sweden.
Qaxootiga Syria ayaa ugu badnaa tirada magangalyo doonka, halka Eritrea ay gashay kaalinta labaad. 70% dadka wadanka iska dhiibay ayaa ka yimid labadaas wadan iyo dad aan wadankooda la aqoon. Sweden ayaas sharci siisay 12 000 qof oo Syrian ah sanadkii tagay. Iyadoo la filayo in tiro intaas ka badan ay yimaadaan sanadkaan.
Tirada Soomaalida magangalyo doonka ah ayaa hoos u dhacday sanadkii hore, halka ay siyaaday dadka lala mideynayo qaraabada. Guud ahaan dadka wadanka ku soo galay xiriirka familada ee la xiriira qaxootiga ayay Soomaalidu ahaayeen tirada ugu badan 65%. Sanadkii hore ayaa xiriir qaraabo waxay Sweden sharci ku siisay 40 000 qof kuwaasoo isugu jira dadka loo keenay qaxootiga iyo kuwa ku yimid xiriirka kale sida guurka. Soomaalida ku timid mideynta reeraha ayaa lagu qiyaasay 6900 qof.
Sweden ayaa sanadkii hore waxay kaalinta 3-aad ka gashay wadamada Yurub kuwa ugu qaabilaada badan qaxootiga. Qaasatan qaxootiga Syria ayay Sweden ahayd wadanka qaabilay tirada ugu badan maadaama Sweden ay tahay wadanka keliya ee Yurub bixiya sharciga joogtada ah.
Raysal wasaaraha oo ka hadlay arinta mideynta reeraha Soomaalida
Wariyaashii Sweden oo la siidaayay iyo cadaynta oo bug ahayd
January 6, 2014 at 08:19
Sc masha alaah waa tiro badan dadka sharciga sugooyane alaha usaqiro dadka loo diidayna alaha uga soo qaado.
Walaalayaal xujadii labada sano yaa aqbaar ka haayo aniga 27 december ayuu maxkamada magareshinka diidmo iisoo tray .
Qofkii aqbaar cusub haayo ama rajo hadeey jirto aan kala faaideysano nala soo socodsiiya wixii qeerka ku jiro alaha na was fajita.
January 6, 2014 at 08:22
Wixii qeerka ku jiro alaha na waafajiyo.
Cafwan mobilka ayaa kalimada bedelay
walaal bal waxaaad iikala sheegta sharciga joogtada ah iyo kumeel gaadhka iyo ka daganaanshaha waxay kala yihiin hadaad aqoon uleedahay mahadsanid.
nurshe al geberti says:
January 6, 2014 at 20:50
walashey rali iga noqo sida an u fahmay markii an qadanayay degenansho iyo sharciga jogtada ah waa isleeyihin ku meelgar waa laceshankara
Aac walalyal sanad cusub aya no bilowday qeyrkisa allaha nasiyo waxan sugeynah isbedel cusub oo dhanka mideynta qoysaska ah kuwa 2 sano kuwa aan waxba isu dhalin iyo inta kale e dhibanayasha ah ilaa hadana wax talaba ah o ey diwlada qaday ama go an saxan o kaso baxay ma hayno fadlan cidi xod so hesho hano so gudbiso nocey noqotaba bye
haarun sxb waad mahadsantahay ninkan webkan qora kunmar ayaan weydiinay dadka singalka xita qofka dheg jalaq uma sinaayo marka anaga an iswereysano waxii cusub insha allah bro
salmaan xaanshi says:
asc walalayaal fikirka sulayman mit lamida ana qabo sharciga degenansho .kumeel garka ah kan googtada ah maxey kala yihiin saxibayaal jawaab